MIHAMY MADA FASHION 2021: Styliste 23 notolorana mari-boninahitry ny kanto, ny soratra ary ny kolontsaina · déliremadagascar
Niavaka ny lanonana famaranana. Fahombiazana tanteraka ny hetsika Mihamy Mada Fashion andiany faharoa nokarakarain’ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina (MSK) ny 12 ka hatramin’ny 14 febroary 2021 teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Nampiavaka ny andro fahatelo ny fahamaroan’ireo mpitsidika ny trano heva. Teo ihany koa ny filatroana nampisehoana ireo zava-bitan’ireo mpamorana ireo haingo isan-karazany, toy ny tao-volo, akanjo… Tsiahivina fa mpisehatra amin’ny haingo, bika aman’endrika 50 sy « styliste » 39 no nampiranty ireo asa tanany nandritra ity hetsika ity. Ankoatra izany dia mipetraka ho tantara ho sehatry ny famoronana lamaody ny fanolorana mari-boninahitry ny kanto, ny soratra ary kolontsaina ho an’ireo « styliste » 23 nandritra ny lanonana famaranana ny Mihamy Mada Fashion 2021.
Dimy (05) mianadahy tamin’izy nahazo mari-boninahitra « commandeur », fito (07) « officier » ary 11 « chevalier ». Nohamafisin’ny Ministry serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy fa hetsika natao hanampiana tosika ireo mpamorona Malagasy sy ireo mpisehatra rehetra tsy ankanavaka amin’ny tontolon’ny lamaody ity hetsika ity. »Vonona hatrany ny ministera amin’ny fanohanana azy ireo » hoy izy.
Marihina fa ankoatra ny filatroana dia nanafana ny lanonana famaranana ny 14 febroary 2021 ny mpanakanto kalaza toa an’i Naël, Mr Sayda ary ny tarika Mage 4.